၂၀၁၉ နွေရာသီမှာ ခေတ်စားစပြုနေတဲ့ အရောင်ဆန်း (၅) မျိုး -
၂၀၁၉ နွေရာသီမှာ ခေတ်စားစပြုနေတဲ့ အရောင်ဆန်း (၅) မျိုး
Posted on March 11, 2019 March 11, 2019 Author Stella	Comment(0)
နွေရာသီမှာလန်းနိုင်ဖို့ ရှော့ပင်းထွက်တဲ့အခါ ဒီအရောင်လေးတွေသာ ရှာဝယ်လိုက်တော့နော် 🥰
ယောင်းတို့ရေ…ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲတွေမှာ အများဆုံးသုံးလာကြတဲ့ အရောင်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီနှစ်အတွက်ဘယ်အရောင်တွေက ခေတ်စားလာနိုင်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရနေပါပြီနော်။ မနှစ်က အနေအထားမြွေဖားအရဆိုရင် Mustard Yellow လို့ခေါ်တဲ့ အဝါရောင်က ရေပန်းစားခဲ့သလို ဒီနှစ်နွေရာသီမှာရော ဘာအရောင်တွေက ယောင်းတို့အသည်းစွဲဖြစ်လာမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်
လိမ္မော်နဲ့ပန်းရောင်ကြားကအရောင်ဖြစ်တဲ့ သန္တာရောင်က ဒီနှစ်ရဲ့ရေပန်းစားလာနိုင်ချေအရှိဆုံးအရောင်တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေပါတယ်။ အရမ်းလှတဲ့ သန္တာရောင်က ဖက်ရှင်လောကထဲက ပျောက်ကွယ်နေတာ တော်တော်တောင်ကြာနေကာမှ ဖြုန်းခနဲဆိုသလို ပြန်ရေပန်းစားလာတာပါ။
Relate article >>> ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွဲအစပ် (၃) ခု
တိမ်မြုပ်နေတာအတန်ငယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ နနွင်းရောင်ကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ခေတ်စားလာဖို့ ရှိနေပါတယ်ယောင်းတို့ရေ။ နနွင်းရောင်နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသောအရောင်တွေကတော့ အစိမ်းရောင်တွေနဲ့ အသားရောင်ရင့်ရင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်အုပ်စုထဲက တစ်ရောင်ဖြစ်တဲ့ ပိတောက်ခြောက်ရောင်ကတော့ ယောင်းတို့အသည်းစွဲဖြစ်လာဖို့ လမ်းစရှိနေလေရဲ့။ လူငယ်ဆန်ပြီး တက်ကြွတဲ့အသွင်ဖြစ်စေတဲ့ ပိတောက်ခြောက်ရောင်ကတော့ မရိုးနိုင်သော ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
Related article >>> မကြာသေးခင်ကမှ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Paris Haute Couture week 2019 အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
အရောင်ဆန်းအနေနဲ့ နီယွန်စိမ်းက ရှေ့ရောက်လာပါပြီ။ ၂၀၁၉ နွေရာသီမှာ နီယွန်ရောင်တွေအများကြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ထဲကမှ လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိနေတာက နီယွန်အစိမ်းရောင်ပါပဲ။ အပြင်မှာ နီယွန်ရောင်တောက်တောက် ဝတ်ရတာ ကြောင်နေသလိုလိုဖြစ်နိုင်လို့ နည်းနည်းတော့ သတိထားရမယ့် အရောင်ပါ။
အသားအရောင်တော်တော်များများနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ တော်ဖီရောင်ကိုလည်း မေ့ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ဆောင်းဦးအရောင်ဖြစ်တဲ့ တော်ဖီက နွေရာသီအရောင်စုစည်းမှုထဲကို ရောက်လာတာ နည်းနည်းတော့ ဆန်းသလိုရှိပေမဲ့ Runway က ပုံတွေကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ ဒီအတွေးတွေပေါ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကဲ…အခုဆို ယောင်းတို့လည်း နွေရာသီမှာ ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ကာလာအနေမထားတွေကို သိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။ ခေတ်စားနေတဲ့အရောင်လေးတွေရွေးဝတ်ရင်း ယောင်းတို့ ဒီထက်ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိရှိလှနိုင်ကြပါစေ။
နှရောသီမှာလနျးနိုငျဖို့ ရှော့ပငျးထှကျတဲ့အခါ ဒီအရောငျလေးတှသော ရှာဝယျလိုကျတော့နျော 🥰
ယောငျးတို့ရေ…ဖကျရှငျရှိုးပှဲတှမှော အမြားဆုံးသုံးလာကွတဲ့ အရောငျတှကေို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ီးနှဈအတှကျဘယျအရောငျတှကေ ခတျေစားလာနိုငျမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးလို့ရနပေါပွီနျော။ မနှဈက အနအေထားမွှဖေားအရဆိုရငျ Mustard Yellow လို့ချေါတဲ့ အဝါရောငျက ရပေနျးစားခဲ့သလို ဒီနှဈနှရောသီမှာရော ဘာအရောငျတှကေ ယောငျးတို့အသညျးစှဲဖွဈလာမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျ
လိမ်မျောနဲ့ပနျးရောငျကွားကအရောငျဖွဈတဲ့ သန်တာရောငျက ဒီနှဈရဲ့ရပေနျးစားလာနိုငျခအြေရှိဆုံးအရောငျတှထေဲမှာ ထိပျဆုံးကရပျတညျနပေါတယျ။ အရမျးလှတဲ့ သန်တာရောငျက ဖကျရှငျလောကထဲက ပြောကျကှယျနတော တျောတျောတောငျကွာနကောမှ ဖွုနျးခနဲဆိုသလို ပွနျရပေနျးစားလာတာပါ။
Relate article >>> ဝတျစုံပွညျ့မဝတျခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကျဖကျရှငျအတှဲအစပျ (၃) ခု
တိမျမွုပျနတောအတနျငယျကွာပွီဖွဈတဲ့ နနှငျးရောငျကတော့ ဒီနှဈထဲမှာ ပွနျခတျေစားလာဖို့ ရှိနပေါတယျယောငျးတို့ရေ။ နနှငျးရောငျနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျဖို့ အကောငျးဆုံးသောအရောငျတှကေတော့ အစိမျးရောငျတှနေဲ့ အသားရောငျရငျ့ရငျ့တှဖွေဈပါတယျ။
အဝါရောငျအုပျစုထဲက တဈရောငျဖွဈတဲ့ ပိတောကျခွောကျရောငျကတော့ ယောငျးတို့အသညျးစှဲဖွဈလာဖို့ လမျးစရှိနလေရေဲ့။ လူငယျဆနျပွီး တကျကွှတဲ့အသှငျဖွဈစတေဲ့ ပိတောကျခွောကျရောငျကတော့ မရိုးနိုငျသော ရှေးခယျြမှုပါပဲ။
Related article >>> မကွာသေးခငျကမှ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Paris Haute Couture week 2019 အကွောငျး တဈစတေ့စောငျး
အရောငျဆနျးအနနေဲ့ နီယှနျစိမျးက ရှရေ့ောကျလာပါပွီ။ ၂၀၁၉ နှရောသီမှာ နီယှနျရောငျတှအေမြားကွီး ထှကျပျေါလာတဲ့ထဲကမှ လူစိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးရှိနတောက နီယှနျအစိမျးရောငျပါပဲ။ အပွငျမှာ နီယှနျရောငျတောကျတောကျ ဝတျရတာ ကွောငျနသေလိုလိုဖွဈနိုငျလို့ နညျးနညျးတော့ သတိထားရမယျ့ အရောငျပါ။
အသားအရောငျတျောတျောမြားမြားနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ တျောဖီရောငျကိုလညျး မခေ့နျြထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ဆောငျးဦးအရောငျဖွဈတဲ့ တျောဖီက နှရောသီအရောငျစုစညျးမှုထဲကို ရောကျလာတာ နညျးနညျးတော့ ဆနျးသလိုရှိပမေဲ့ Runway က ပုံတှကွေညျ့ပွီးနောကျမှာတော့ ဒီအတှေးတှပေျေါလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
ကဲ…အခုဆို ယောငျးတို့လညျး နှရောသီမှာ ခတျေစားလာနိုငျတဲ့ ကာလာအနမေထားတှကေို သိသှားလောကျပွီထငျပါတယျနျော။ ခတျေစားနတေဲ့အရောငျလေးတှရှေေးဝတျရငျး ယောငျးတို့ ဒီထကျပိုပွီး ယုံကွညျမှုရှိရှိလှနိုငျကွပါစေ။
Tagged color, Fashion, latest, palette, Summer, trend
ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်စရာမလိုဘဲ စတိုင်ကျစေဖို့ ဘာတွေသိထားရမလဲ။
Posted on July 23, 2017 October 20, 2018 Author Megan
ဈေးကြီးတဲ့ Branded တွေ ဝယ်ဝတ်မှ စတိုင်ကျတဲ့သူ ဖြစ်မှာလား ??? နိုးပါနော် … စတိုင်ကျသူဖြစ်ဖို့ ဒါလေးတွေသိထားရင်အိုခေပြီလေ။
Posted on June 19, 2018 August 24, 2018 Author Akari
Skinny Jeans တွေကို တီရှပ်တွေနဲ့ပဲ တွဲပြီး ဝတ်နေတုန်းလား? ဒီလိုလေးတွေ လန်းလိုက်ပါဦး…
Ankle Boots လေးတွေကို ဂါဝန်လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုဝတ်မလဲ ?
Posted on July 18, 2017 July 18, 2017 Author Megan
Ankle Boots တွေဝယ်ထားပြီး ဘယ်အင်္ကျီနဲ့ ဘယ်လိုတွဲဝတ်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့ ယောင်းတို့ရေ၊ ဒီလိုလေးတွေဝတ်ကြည့်ရင် အရမ်းမိုက်သွားမှာနော်…